ရှိုက်သွင်း မှုတ်ထုတ် — ဟဲ့ ပလုပ်တုပ်! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှိုက်သွင်း မှုတ်ထုတ် — ဟဲ့ ပလုပ်တုပ်!
ရှိုက်သွင်း မှုတ်ထုတ် — ဟဲ့ ပလုပ်တုပ်!
Posted by alinsett on Nov 20, 2015 in Creative Writing, Ideas & Plans, My Dear Diary | 15 comments
၁-မီးခြစ်ကို ထောက်ခနဲ ခြစ်ချလိုက်ပြီးးး
(ဘဝထဲက တချို့အရာတွေကို အဲ့လို မီးမြှိုက်ပြီး ပြာချပစ်လိုက်ချင်တယ်)(အဲ့လို မီးညှိချိန်မှာ ပြာချသင့်တာတွေ စတင်ပြာချနေပြီလို့ ခံစားလို့ရတယ်)
၂-စီးကရက်ကို မီးညှိပြီးတာနဲ့ စတင်ပြီး ရှိုက်ဖွာလိုက်တယ်— မီးခိုးငွေ့တွေက အဆုတ်ထဲအထိ ပြေးဝင်လာတယ်၊ (အသက်ကိုအောင့်ထားရင်းနဲ့ တွေးမိတာက တချို့နာကျင်စရာတွေကို သက်ပြင်းချချင်လို့ အဲ့ဒီလို မီးခိုးတွေနဲ့ ရောရှိုက်လိုက်ပြီး—မီးခိုးငွေ့တွေ မှုတ်ထုတ်လို့ရသလို ဝှူးခနဲ မှုတ်ထုတ် ရှင်းပစ်လိုက်ချင်တယ်)(ဆေးလိပ်ကို ရှိုက်ဖွါလိုက်ရချိန်မှာ သက်ပြင်းချစရာတွေ ရှိုက်သွင်းပြီး ဝှူးခနဲ မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရသလို ခံစားလို့ရလိုက်သလိုပဲ)
၃-တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုဝင်သွားတဲ့ စီးကရက်တိုကို ကြည့်ရင်းးး ပြာချသင့်တာတွေ ချပစ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ ခံယူနေလိုက်တယ်၊၊(စီးကရက်ကို သောက်နေရင်းးးး ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုကိုယ် လျှာဖျားနဲ့သပ်ကြည့်တော့ —ချိုလိုက်တာာာာ — ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းလိုက်ရစဉ်က အတွေ့အထိလိုပဲ—-)
စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ ကျနော် — မသောက်စဖူး စီးကရက်တွေ တစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် ထိုင်သောက်နေမိတာ—
လှည်းတန်း ဂုံးတံတားကြီး အောက်မှာ—
အတွေးတွေ တဝေဝေနဲ့ —မီးခိုးငွေ့တွေကို ရှိုက်သွင်းလိုက် —မှုတ်ထုတ်လိုက်—
သတိတစ်ချက်သွင်းပြီး ဘေးဘီကို လှည့်ကြည့်မိတော့ —-
သူ့နှာခေါင်းလေးကိုသူ လက်ညှိုးနဲ့လက်မ ဖိပိတ်ရင်းးး
ကျနော့်ကို လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုပ်နေတဲ့ အသားဖြူဖြူ (နည်းနည်း ဝဝ) ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်—-
တိန် တိန် (၂ခါတိန်)
ဟိုဘက်တိုးပြီး မီးခိုးလွတ်ရာမှာ သွားထိုင်လည်း ရနေတာကို—
ကျနော့်ဘေး ကပ်ကပ်လေးမှာ လာထိုင်ပြီး သူ့သောကသူရှာ —မီးခိုးရှူရခက်ပါလျက်နဲ့ ဆက်ထိုင်ချင်ချင် လာလုပ်ပြနေတယ်—
သူ့ကို သေချာစိုက်ကြည့်တော့ သူကလည်း ပြန်စိုက်ကြည့်တယ်—
သူ့နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားတဲ့ သူ့လက်ကို ကျနော်ကြည့်လိုက်တယ်—
.ဆောရီးဗျာာာ လို့လည်း ပြောလိုက်တယ်—
(သူက ဟိုဘက်မတိုးတော့)ကျနော်ကပဲ ဒီဘက်နည်းနည်းထပ်တိုး ပေးလိုက်တယ်—
ကျနော် ဆက်ပြီး စီးကရက်ထိုင်သောက်နေလိုက်တယ်—
မိန်းမဖြစ်သူက သူ့ခင်ပွန်းကို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေချိန်မှာ ပြောလိုက်တယ် “ရှင် ကျမရှေ့က အခုထွက်သွား” တဲ့၊၊
အဲ့ဒီတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ပြန်ပြောတယ်”ငါ ထွက်သွားပါ့မယ်—ဒါပေမယ့် မင်း ငါ့ပေါင်ပေါ် တက်ထိုင်နေတာကနေ အရင် ဆင်းပေးပါအုန်း”တဲ့၊၊
ကျနော် အဟက်ခနဲ ရယ်လိုက်မိတယ်၊ စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ဟာသတစ်ပုဒ်အကြောင်း သတိရမိတာ မဆိုးပါဘူး၊၊
.ဘေးက ကောင်မလေးကတော့ ပေစောင်းစောင်း ကြည့်နေတယ်၊ သူ့ကိုများ ရယ်တယ်ထင်နေလားမသိ၊၊
(အင်းးးး ငါ့မှာတော့ ထိုင်စောင့်နေလည်း ရောက်လာမယ့် ဂဲဂဲ(girl girl)လေးတစ်ယောက်တောင် မရှိပါလား)
စိတ်ရှုပ်နေလို့ သက်သာလို့ သက်သာရာရလိုရငြား သောက်နေမိတဲ့ ဟောဒီ စီးကရက်တွေကို
အခုလို ဘေးလူတစ်ယောက်က မနှစ်သက်သယောင်ပြတာကို တွေ့လိုက်တော့—-
.ဆေးလိပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးတင်မက ဘေးလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာပါလားးးးလို့ သတိပြန်ရ—
ငါ—ဆေးလိပ် ကြိုက်သွားလို့တော့ ဘာကောင်းကျိုးမှ ထူးပြီးရလာမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ တွေးမိသွားတယ်—
.ကျေးဇူးပါ— ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရောင်အရိပ်တို့ရေ—
နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊၂၀၁၅
(ည ကိုးနာရီ ငါးမိနစ်)
Phone နဲ့ပိုစ့်တင်တာ တိုင်ပတ်—
Notepad ထဲ ရေးထားတာကို ကော်ပီယူပြီး ပိုစ်ရေးတဲ့အကွက်ထဲ paste လုပ်တာ ဘယ်လိုမှ မရ
အကြိမ်များစွာ ကော်ပီယူလိုက် လာချလိုက်
ဆောရီးဗျာာာ လို့လည်း ပြောလိုက်တယ်—
ဘေးက ကောင်မလေးကတော့ ပေစောင်းစောင်း ကြည့်နေတယ်၊ သူ့ကိုများ ရယ်တယ်ထင်နေလားမသိ၊၊
ဆေးလိပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးတင်မက ဘေးလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာပါလားးးးလို့ သတိပြန်ရ—
ကျေးဇူးပါ— ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရောင်အရိပ်တို့ရေ—
.ဆေးလိပ်လည်း မသောက်ရဘူး။ အရက်လည်း မသောက်ရဘူး။ ကွမ်းလည်း မစားရဘူး။ ဘိန်းလည်း မရှုရဘူး ဆိုရင် နတ်ပြည်ဘယ်မှာလဲ။
.လောလောဆယ်တော့… Net ပြည် လေး… ရှိနေတာ…တော်သေး…
ဘေးက ကလေးမ က စီးကရက်နံ့လေး မွှေး လိုက်တာ လို့ များ ပြောရင် ဆက်သောက်မဲ့ သဘောပေါ့။ :-))
ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်.. ဘေးနားက အသားဖြူဖြူလေးကို
( စိတ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ဟာသတစ်ပုဒ်အကြောင်း သတိရမိတာ မဆိုးပါဘူး၊၊)
ဆရာသော်က က ရေးဖူးတယ်။
သူစိတ်ညစ်ရင် ရေးစရာက ဟာသတွေချည်း ပေါ်လာတယ်တဲ့။
အဲ့လို ဟာသ စာရေးဆရာကြီးတွေဟာ.. ဒုက္ခကို ဟာသအဖြစ်…. ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းသူလို့…ပြောရမလို…
ဒါလေးတောင် Facebook မှာ Share ထား မိသေးတယ်…
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်’ ဆိုတာပဲလူပြောများကြတာပါ။ အခုတော့ ဆေးလိပ်သောက်လို့ရလာတဲ့ နီကိုတင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါတဲ့။၁။ အစာစားချင်စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းပေးတဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျလာပါလိမ့်မယ်။၂။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတဲ့အခါမှာအာရုံကြောတွေကို ပြေလျော့စေပြီး အာရုံစိုက်မှုအားကောင်းလာ စေပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာခံစားရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး နီကိုတင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ပေးမှုတွေအပေါ် စိတ်ပညာရှင်တွေက လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာခံစားရသူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းမြင့် ပါတယ်။ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ဝေဒနာရှင် ၉၀ရာခိုင်နှုန်း၊ နှစ်ဖက်မြင်စိတ်ရောဂါ (အငိုအရယ်) ဝေဒနာရှင် ၇၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ စိတ်ကျသူ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက် လူတော်တော်များများဟာ ဆေးလိပ်သောက်ကြပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဒီ.စီ.ဂျားဗစ်စ် ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာတော့ အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆေးလိပ်သောက်ကြခြင်းဟာ နီကိုတင်းက စိတ်ရောဂါကြောင့်အတွင်းစိတ်ကပြောတာတွေကို လျော့ကျသက်သာစေလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အတွင်းစိတ်မှာထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေရမယ့်အစား အပြင်လောက ကို အာရုံရစေဖို့ နီကိုတင်းကကူညီပေးပါတယ်။ နီကိုတင်းဟာ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေအပေါ် အကျိုးရှိစေပုံ တွေကို ညွှန်းဆိုတဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း သက်သေပြမှုတွေမရှိသေးတဲ့အတွက် ထည့်စဉ်းစားဖို့တော့မသင့်တော်ပါဘူး။၃။ ဆေးလိပ်ဟာ အတွေးအမြင်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေပါတယ်။၄။ ပါးစပ်ထဲကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကောက်ကောက်ထည့်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိရင်လည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။၅။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။၆။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေဟာ သာမန်အလုပ်သမားတွေထက် အညောင်းဆန့်ချိန်ပိုယူတတ်ပါတယ်။၇။ နီကိုတင်းဟာ လှုံ့ဆော်မှုအားကောင်းတဲ့ စက်ယန္တာရားတစ်ခုပါပဲ။ အလုပ်တာဝန်တွေအပေါ်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် အာရုံစိုက်မှုကိုဖြစ် ပေါ်စေပါတယ်။၈။ ရော့ခ်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဂျိုအန်ဂျက်လို အသံအက်အက်ရချင်လို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ကောင်းကောင်းကြီးကူညီပါလိမ့်မယ်။( Jack )‪#‎သစ်ထူးလွင်‬(ကျန်းမာရေး)
Share ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်က… (ဆိုလိုတာက စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်တယ်ပေါ့ညှော် ) လို့…
အိုက်…. သစ်ထူးလွင်က… ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ… ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ… ရှာဖွေ တင်ပြတတ်လွန်းတယ်..
အိုက် ကျန်းမာရေးသတင်းပေးချက်ကို ဖတ်ကြည့်မိပြီး…
ပြန်တောင် မရှဲရဲဘူး… ဟီဟိ။။။
…အော်..သစ်ထူးလွင်..သစ်ထူးလွင်… အနော် သိလိုက်ပါပြီ….ဂျာ…
ည ကိုးနာရီ လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားအောက်
ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဆိုတော့ အင်းလျားကန်ဘောင်ဘက်က လွင့်ထွက်လာတဲ့
– – – – – – – များလား ?
ရာမညဆောင်ဘက်ခြမ်းမှာ သိပ်မထိုင်နဲ့နော် ၊
( ပုံ / လှည်းတန်းနယ်စားကြီး )
ကိုးနာရီဆိုတာ စာရေးပြီးချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာလှေ
စာက အဆောင်(ဦးရှင်ကြီးကျောင်းဆောင်မဟုတ်)ရောက်မှ ရေးတာလှေ
လှည်းဒါန်းဂုံးအောက်မှာ ဆေးလိပ်ထိုင်သောက်ချိန်က ၇ခွဲ ၈နာရီလောက်ပေါ့စ်
-အဲ့သာမှီးလေးကို ကြည့်ရတာတော့ ခပ်သန့်သန့်လေးပါပဲ
အဲ ဘာ ထင်နေပါလှိမ့်
ငွေကုန် သံပြာ ချောင်းတွေဆိုး
သူနဲ့လက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်.. ဆိုင်ပြင်ခုံနေရာရှိမှ.. ဆေးလိပ်ပေးသောက်မှ…ထိုင်ဖြစ်ကြတာ..။
ဆရာက.. သမီးက အတင်းတားတဲ့ကြားက…အတင်းကိုခိုးသောက်တာ..။